अमिर खानले किन भेटे तुर्कीका राष्ट्रपति अर्दोआनलाई? – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsअमिर खानले किन भेटे तुर्कीका राष्ट्रपति अर्दोआनलाई?
October 8, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, मनोरञ्जन, मुख्य समाचार 0
तुर्कीः बलिउड स्टार अमिर खानले तुर्कीका राष्ट्रपचि रेचेप तैयप अर्दोआनसित भेट गरे। तुर्कीको राष्ट्रपति कार्यालयले यो भेटघाटको एउटा फोटो सार्वजनिक गरेको छ। अमिर खान अहिलेघरि आफ्नो मुभी ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ को प्रमोशनको सिलसिलामा तुर्कीमा छन्।
उनी बितेको हप्ता इस्ताबुल पुगका थिए। शनिबार तुर्कीका राष्ट्रपति कार्यालयले एउटा आधिकारिक ट्विटर हेन्डल ‘तुर्किश प्रेजिडेन्सी’-मा एउटा फोटो ट्विट गरिएको थियो जसमा अमीर खान र अर्दोआन हात मिलाउँदै गरेको देखिएको थियो।
यो भेटघाट राजधानी अङ्कारामा भएको थियो। फोटोसितको ट्विटमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपति अर्दोआन अभिनेता अमीर खानलाई राष्ट्रपति परिसरमा स्वागत गर्दै।’ यस भेटघाटलाई शिष्टाचार भेटघाट मानिँदैछ।
राष्ट्रपतिभन्दा अघि अमिर खानले तुर्कीको संस्कृति र पर्यटन मन्त्री नुमान कुर्तुलमससित पनि भेटघाट गरेका थिए। अमीर खानको फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ तुर्कीमा पनि रिलिज हुन गइरहेको छ। यस फिल्ममा अमीर खानले एकजना सङ्गीत सुपरस्टारको भूमिमा निभाइरहेका छन् जसले एकजना नौजवान मुस्लिम केटीको सपना पूरा गर्न प्रेरणा बन्छन्।
‘दङ्गल’-फिल्म देखि चर्चामा रहेको जायरा वसीमले यस फिल्ममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेकी छन्। जायस त्यो केटीको भूमिकामा छिन् जो बुर्का लगाएर इन्टरनेट सिङ्गिङ् सेन्सेसन बन्छिन्। अद्वैत चन्दनद्वारा निर्देशित फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’-20 अक्टोबरका दिन रिलिज भइरहेको छ।